Dagaalkii ka soconayay qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho oo dib usoo cusboonaaday maalintii shalay aheyd ayaa wuxuu sababay inay ka barakacaan dad aad ufara badan oo ubadan caruur iyo haween.
dagaalkan ayaa habeenkii xalay ahaa oo dhan waxaa laga maqlayay daryanka rasaasta la isu adeegsanayay inta badan xafadaha magaalada muqdisho waxaan dadka ka agdhawaa Xaafaadaha uu dagaalku saameeyey ka billowday Bara kac.
Xaafadaha si wayn ay dadku uga barakaceen ayaa waxaa ka mida ah Ceel Garboole, Xaajiyo Culumo, Xaliimo Hayte, Shibis, Shangaani, Arjantiin, iyo Cabdi Casiis, dadka ka qaxayey dagaalka soo noqnoqday ee la’isu adeegsanayo Hubka Nuucyadiisa kala duwan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in qaarkood ay gaareen Gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan Magaalo Madaxdiisa Marka, halka kuwa kalena lagu arkayey Xaafadaha kale ee Magaalada Muqdisho.
Waxaa yar xogta rasmiga ah ee laga helayo waxyeelada uu gaystey dagaalkaan,laakiin sida ay Xaqiijeen dhakhaatiirta ka hawl gasha isbitaalada Madiina iyo Xayaat ayaa sheegay in dadka ku dhawaacmay dagaalkaani ay kor u dhaafayaan illaa iyo shan iyo konton qof oo u badan dad Rayid, waxayna sheegeen in qaarka mid ah dadka ay dhaawacyadu ka soo gaareen dagaalka ay qaarkood u dhinteen Dhiig bax ka dib markii gaadiid lagu soo gaarsiiyo Isbitaalada Magaalada Muqdisho lawaayay.
Dr. Maxamed Axmed Maxamed (M. Dheere ) oo ka mid ah dhakhaatiirta ka hawl gasha Isbitaalka Xayaat ayaa sheegay in Isbitaalka uu u taag la’yahay dhaawacyada faraha badan ee lasoo gaarsiinayo, wuxuuna sheegay in ay dhaawacyada qaarkood u gudbiyeen Isbitaaladda kale ee Magaalada Muqdisho. Maadaama hawsha Isbitaalka ay tahay Hooyadda iyo Dhallaanka.
Dr. Maxamed Dheere waxa kaloo uu sheegay in uu aad ugu xun yahay dagaalada ka soo cusboonaadey magaalada Muqdisho. Isagoo sheegay in shacabka Soomaaliyeed aysan u dulqaadan Karin dagaaladda micno la’aanta ah ee waxyeeladda loogu geysanayo dadka Rayidka ah.
Dhinaca kale waxaa gaabis u muuqda dadaalkii ay wadeen waxgaradka Waqooyiga Muqdisho ka dib markii ay bur burtey Xabad joojintii, laakiin hadana waxaa jiro rajo ay laga qabo in dagaalku joogsato.
Macalin Nuur Max’ed Siyaad oo ka mid ah Waxgaradka waan waanta ka dhex waday Kooxaha ku dagaalamaya Waqooyiga Magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu wadaa in isaga iyo waxgaradkale ay kala dhex galaan kooxaha Dagaalamaya.
Qaar ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee Beesha Mudulood ayaa uga digay Beesha Habar Gidir in ay ku lug yeeshaan dagaaladda ka socda Waqooyiga Magaalada Muqdisho
C/llaahi Xuseen Axmed oo ka mid ah Guddiga dhaqanka ee Beesha Mudulood ayaa sheegay hadii ay soo dhex galaan dagaalka ka socda qaar ka tirsan Xaafadaha Magaalada Muqdhiso Beelaha Habar Gidir loo baahan yahay in ay u muuqdaan kuwo dhex dhexaad ah.
C/llaahi Xuseen waxa uu ka dhigay Cawaaqib xumada ka imaanka karta hadii Beelaha Habar Gidir aysan dhex dhexaad ka noqon dagaalka.
Hadalka C/llaahi Xuseen ayaa waxa uu dabo socdaa Baaq ay soo saareen Odayaasha dhaqanka ee Beesha Habar Gidir, baaqaasoo ay kaga dalbanayeen in ay dagaalka joojiyaan Beelaha ku dagaalamaya Waqooyiga Magaalada Muqdisho hadii ay farin galin ku sameyn doonaan.
Dhinica kale C/llaahi waxa uu soo jeediayay in dagaalka la joojiyo si shuruud la’aan ah isagoo sheegay in dagaalku uusan wax faa’iido ah keenayn khasaare mooyee,Wuxuuna codsadey in wadahadal lagu dhameeyo waxkasta oo la’isku qabto , wuxuuna sheegay in dagaalka ka socda Waqooyiga Magaalada Muqdhisho uu yahay mid kala fogeynaya Beelo Walaaha ah oo aan sinaba u kala maarmin.
Ugu dambayntiina C/llaahi Xuseen waxa uu ugu baaqay Waxgaradka Beelaha Mudulood inay si hagar la’aan ah uga qayb qaataan sidii loo damin lahaa Colaada ka aloosan Deegaanadooda.
Shirwaynihii Ururka Dhakhaatiirta Soomaaliyeeed ee labadii sannaba mar la qaban jirey ayaa lagu wadaa in uu maanta ka dhaqo Hoolka Shirarka ee Isbitaalka Hayat ee Magaalada Muqdisho.
Shirwaynahaan oo loogu balansanaa in Ururka Dhakhaatiirta Soomaaliyeed uu yeesho Guddoomiye iyo Guddoomiye ku xigeeno ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli ay jiraan dhaliilo fara badan oo la xiriira iska war qab la’aan iyo wax qabad la’aan lagu dhaliilayo dhakhaatiirta iyo Xubnaha ka tirsan Ururkaba.
Dr. C/Nuur Xuseen Maxamed ayaa ku dhaliilay Guddiga Dhakhaatiirta ay noqdeen kuwo Fadhiid ah kana gaabiiyay hawlihii loo xilsaarey. Isagoo sheegay in dhakhaatiirtu aysan wax wayn ka qabanin arrinta muranka dhalisay ee la xiriirta xirnaanshaha Isbitaalka S.O.S ee Magaalada Muqdisho
Dr. C/Nuur wuxuu kaloo intaasi ku darey in Ururka Dhakhaatiirta Soomaaliyeed aysan wax ka qaban Duruufo badan oo qalafsanaa oo soo marey Dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka hawl gala Gudaha dalka Soomaaliya Sida Dilka, Afduubka, iyo hanjabaadaha, isagoo sheegey in tii ugu dambaysayna ay ku dhacday Dr. Bashiir Shiikh Cumar oo isagu ka hawl gala Isbitaalka S.O.S oo illaa iyo imminka aysan arrintiisu dhinac u dhicin
Dr. C/Nuur waxa uu sheegay in Ururka Dhakhaatiirta Soomaaliyeed Muddadii uu jirey aysan jirin wax la dhihi karo Ururka waa ay u qabsoomeen. Wuxuuna sheegay in wax qabadka Ururku uu ku soo koomay Baaqyo dhinaca afka ah oo aan Ficil laheyn.
Siyaasiyiinta iyo Odayaal dhaameedka ka qayb qaadanaya shirka dib u Heshiisiinta Soomaalida ee ka socda dalka Kenya ayaa Urur Goboleedka IGAD iyo Beesha Caalamka ka codsadey in Xulista iyo Doorashada Xubnaha Baarlmaanka ay ka hormariyiyaan Heshiisiinta Siyaasisiinta.
Iyadoo Xaaladda shirka dib u heshiisiinta Soomaalida lagu tilmaamayo mid meel wanaagsan maraya inta badan Hogaamiyeyaasha Soomaaliduna ay aqbaleen ka qayb galka Wajiga Sadexaad ee Shirka ayaa dhinaca kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in qaar ka tirsan Siyaasiyiinta ku sugan Magaalo Madaxda dalka Kenya ee Nairobi ay ka codsadeen Urur Goboleedka IGAD iyo Beesha Caalamka in inta aan la gaarin Xulista Xubnaha ka mid noqonaya Golaha Baarlmaanka Soomaaliya in ay ka hor miriyaan heshiisiinta Siyaasiyiinta isku haybta ah ee ku kala tagey Siyaasada.
Waxaana lasoo sheegayaa in Siyaasiyiinta isku haybta ah ee ku kala tagey Siyaasada qaarkood ay isaga hor yimaadeen Xulista Xubnaha Gobolaha Baarlmaanka uga mid Noqonaya Beelahooda. Taasoo keentey in qaarkood ay isu soo jeedinayaan in la dhex dhexaadiyo iyaga ka hor inta aysan wax qeybsan
Waxaana laga cabsi qabaa in hadii aan arrintaasi xal loo helin inay Caqab hor leh ku noqoto hanaanka Shirka dib u heshiisiinta Soomaalida.
Dabaal degyo waa wayn oo lagu maamuusayey heshiishkii ay dhawaan ku gaareen Magaalada Naivasha ee Kenya dowlada Sudan iyo Mucaaradka dalkaasi ayaa lagu soo waramayaa in ay Xaley ka dheceen Magaalo Madaxka dalkaasi ee Khartoum.
Dadwaynaha ka qayb qaadanayey dabaal degaasi ayaa waxay siteen Boorar waa wayn oo ay ku muujinayeen sida ay ugu faraxsran yihiin heshiiska ay gaareen Mucaaradka iyo Dowladdu.
Heshiiska ay wada gaareen Kooxaha ku kacsan dowlada iyo Dowlada ayaa waxaa la hadal hayaa in uu horseedi karo in gabi ahaanba lasoo afjaro Gadaalkii Muddada dheeer ka socday dalka Sudan gaar ahaan dhinaciisa Koofureed oo ay gacanta ku hayaan Ururka SPLA ee uu Madaxda ka yahay John Gran.
Inkastoo heshiiska Naivasha ay kasoo baxayaan ifafaalo wanaagsan oo la dhihi karo waxaa uu horsed u yahay dhabihii Mucaaradka iyo Dowladu ay ku noqon lahaayeen kuwo hal dhinac ka soo wada jeeda ayaa hadana waxaa jirta Caqabad aan wali Xal loo helin taasoo ka taagan Gobolka Darfur.
Dadwaynaha u dabaal dagayey Heshiiskaan ayaa dowlada dalka Sudan ka codsadeen in ay xal kama dambays ah ka gaarto arrinta laga dayrinayo ee Gobolka DaarFuur
Kooxaha u dooda Xuquuq aadanaha ayaa ku eedeeya dowlada Sudan inay garab siinayso Kooxo Carab ah oo gabood fal Isir sifeyn ah ka gaysta gobolka DaarFuur laakiin waxaa arrintaasi Beenayay Xukuumadda Sudan.
Magaalooyin ku yaala Jaziirada Haiti iyo Jamhuuriyadda Dominica ayaa lagu soo waramayaa in ay waxyeel ba’an u gaysteen daadad dhoobo wata ka dib markii ay wadamadaasi ay ku dhufteen roobab xoogani .
Waxaana laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen dad aad u fara badan iyadoo dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay roobabkaasina ay kumanaan kor u dhaafayaan.
Gar gaar dhinaca bini’aadanimada ah ayaa lagu soo waramayaa in loo fidiayay dadka ay waxyeeladdu ka soo gaartey fatahaada roobabka ee ku dhaqan labadaasi dal.
Ma jiraan cid si dhab ah u Xaqiijin karta waxyeeladda ay gaysteen Roobabkaani iyo tiro koob la xiriira dhibaato inta ay la’eg tahay ee la soo gudboonaatay dalalkaasi. Laakiin sida ay soo sheegayaan Wariyayaasha ku sugan labadaasi dal waxaa jira dad fara badan oo la aaminsan yahay in ay ku hoos jiraan dhismayaasha ay qariyeen daadadka dhoobada wata.
Faafin: SomaliTalk May 28, 2004
Kenya: Ergooyinka Soomaalida oo qaarkood laga saaray Hoteeladii ay daganaayeen
iyo Dawladda Kenya oo ugu baaqday Kooxaha Soomaalida ee ku maqan Gudaha Dalka inay ugudambayn Nairobi yimaadaan Jimcaha Guji